.“တရုတ်နိုင်ငံမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဖြစ်ပျက်ပုံလေးကို ပျော်ရွှင်စွာ မျှဝေလာတဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ”. – Askstyle
.“တရုတ်နိုင်ငံမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဖြစ်ပျက်ပုံလေးကို ပျော်ရွှင်စွာ မျှဝေလာတဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ”.
CeleChitThuပရိသတ္ၾကီးေရ နာမည္ေက်ာ္ Beuty Bloggerမေလး ပန္ကိတ္ဒါဒါကို အထူးတလည္ မိတ္ဆက္ေပးဖို႕မလိုေလာက္ဘူးထင္ပါတယ္။ သူမဟာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူျဖစ္ေပမယ့္ ျသစေၾတးယားမွပဲ မိသားစုလုိက္ အေျခတက်ေနထိုင္သူတစ္ဦးပါပဲေနာ္။ သူမရဲ႕ တတ္ကၽြမ္းသမွ် အလွျပဳျပင္ပိုင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဗဟုသုတေလးေတြကို မွ်ေဝေပးရင္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ကို အခိုင္အမာရရွိထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပန္ကိတ္ဒါဒါကေတာ့ အားလပ္ခ်ိန္တိုင္းမွာ မိသားစုလိုက္အမွတ္တရပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႕ ဗီဒီယုိဖိုင္ေလးေတြကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္နွာေပၚမွာ တင္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေန႕မွာေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕အသုံးမ်ားဆုံး Weiboမွာ ေခတ္စားခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္မင္းသားေခ်ာပိုင္တံခြန္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ပန္ကိတ္ဒါဒါက”တျခားႏိုင္ငံက တ႐ုတ္မေတြေတာ့မသိဘူး။ ၾသဇီက ကိုယ္သြားေနက်ဆံပင္ဆိုင္က သူငယ္ခ်င္း တ႐ုတ္မကေတာ့ ဖုန္း သုံးခါ missed calls ဝင္လို႔ ျပန္ေခၚတာ နင္ Paing နဲ႔ ခင္လား။
နင္သူ႔ကိုသိလား။ အျပင္မွာ humble ျဖစ္လား။ စတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ အစခ်ီၿပီ။သူ ရွာေဖြ ေမႊေႏွာက္ ထားတဲ့ Paing Takhon အေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ Lee Min Ho အေၾကာင္း ေျပာသလို လွ်ာအရသာ ခံၿပီး ၄၅ မိနစ္ေလာက္ ေျပာသြားတာ အင္း၊ ဟုတ္တယ္ဟုတ္တယ္၊ ဒါေပါ့ဒါေပါ့ ။(အျပင္မွာ မေတြ႕ဖုးေကမယ့္) “အျပင္မွာ sweet ျဖစ္တယ္” ဆိုတာကို( ၃၆၅) ေခါက္ေလာက္ follow ေျဖေပးၿပီးလို႔ ဒီစာတင္လိုက္ပါတယ္။ အရင္တခါကလည္း အလုပ္က ထိုင္းလူမ်ိဳး အ႐ိုးကု ေဒါက္တာမ ေမးတာလည္း ရွိေသးတယ္။
ပိုင္တံခြန္ ပရိသတ္ေတြ ေပ်ာ္ရေအာင္လို႔ပါ။ မွတ္ခ်က္။ ဖုန္းေျပာေနတုန္း ကိုယ့္မ်က္ႏွာက ကိုယ္ကပဲသူမ်ားႏိုင္ငံက အဆင္ေတြ ငမ္းလာရတာ ဒီတစ္ခါကိုယ့္အလွည့္ေလ ေနာ္”လို႕ဆိိုျပီး သူမသူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ ေမးလာပုံကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႕ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြအားလုံးသာာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ေန႕ရက္ေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကပါေစလို႕ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Source…..Yamin Oo’s Facebook
CeleChitThuပရိသတ်ကြီးရေ နာမည်ကျော် Beuty Bloggerမလေး ပန်ကိတ်ဒါဒါကို အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ သူမဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသူဖြစ်ပေမယ့် သြစတြေးယားမှပဲ မိသားစုလိုက် အခြေတကျနေထိုင်သူတစ်ဦးပါပဲနော်။ သူမရဲ့ တတ်ကျွမ်းသမျှ အလှပြုပြင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတလေးတွေကို မျှဝေပေးရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို အခိုင်အမာရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပန်ကိတ်ဒါဒါကတော့ အားလပ်ချိန်တိုင်းမှာ မိသားစုလိုက်အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အသုံးများဆုံး Weiboမှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်မင်းသားချောပိုင်တံခွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပန်ကိတ်ဒါဒါက”တခြားနိုင်ငံက တရုတ်မတွေတော့မသိဘူး။ သြဇီက ကိုယ်သွားနေကျဆံပင်ဆိုင်က သူငယ်ချင်း တရုတ်မကတော့ ဖုန်း သုံးခါ missed calls ဝင်လို့ ပြန်ခေါ်တာ နင် Paing နဲ့ ခင်လား။
နင်သူ့ကိုသိလား။ အပြင်မှာ humble ဖြစ်လား။ စတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ အစချီပြီ။သူ ရှာဖွေ မွှေနှောက် ထားတဲ့ Paing Takhon အကြောင်း ကိုယ်တွေ Lee Min Ho အကြောင်း ပြောသလို လျှာအရသာ ခံပြီး ၄၅ မိနစ်လောက် ပြောသွားတာ အင်း၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေါ့ဒါပေါ့ ။(အပြင်မှာ မတွေ့ဖုးကေမယ့်) “အပြင်မှာ sweet ဖြစ်တယ်” ဆိုတာကို( ၃၆၅) ခေါက်လောက် follow ဖြေပေးပြီးလို့ ဒီစာတင်လိုက်ပါတယ်။ အရင်တခါကလည်း အလုပ်က ထိုင်းလူမျိုး အရိုးကု ဒေါက်တာမ မေးတာလည်း ရှိသေးတယ်။
ပိုင်တံခွန် ပရိသတ်တွေ ပျော်ရအောင်လို့ပါ။ မှတ်ချက်။ ဖုန်းပြောနေတုန်း ကိုယ့်မျက်နှာက ကိုယ်ကပဲသူများနိုင်ငံက အဆင်တွေ ငမ်းလာရတာ ဒီတစ်ခါကိုယ့်အလှည့်လေ နော်”လို့ဆိုပြီး သူမသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မေးလာပုံကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးသာာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။